Madaxweyne Farmaajo oo Casho Sharaf u fidiyey Guddigii qabanqaabada Madasha Tiknaloojiyadda ee Muqdisho+Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo Casho Sharaf u fidiyey Guddigii qabanqaabada Madasha Tiknaloojiyadda ee Muqdisho+Sawirro
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Xarunta Madaxtooyada casho sharaf ugu fidiyey Guddigii qabanqaabada Madasha Tiknaloojiyadda ee Muqdisho, martidii ka qeyb gashay iyo maalgeliyeyaasha waddaniga ah ee ka qeyb qaatay qabsoomidda Shirweynahan.
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay ganacsatada Soomaaliyeed ee sida is-xilqaannimada ah u maalgeliyey qabsoomidda Madasha Tiknaloojiyadda ee Muqdisho, waxa uuna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhiirri geliyo dhallinyarada maskax-shiilka ah ee ku hamminaya in ay la tartamaan dunida casriga ah.
“Maalgelinta aad u sameyseen barnaamijkan macno weyn ayey leedahay, sababtoo ah waxaad ku dhiirri geliseen dhallinyaradeenna hal abuurka iyo curinta, kuwaas oo fure u ah horumarka dalkeenna iyo sidii aan ula tartami lahayn dalalka kale ee caalamka.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga warbixiyey dhallinyarada qaban qaabisay iyo hal abuureyaasha Soomaaliyeed ee ka qeyb galay Madashan qorshaha Dowladda ee ku qotoma joogteynta bandhigyada hal-abuurka dhallinyarada, diyaarinta qorsheyaal Qaran oo ku wajahan horumarinta tiknaloojiyadda iyo xarummo cilmi bariseed.
Dhankooda, daneeyeyaasha tiknoloojiyadda, guddiga qaban qaabada, maalgeliyeyaasha iyo hal abuureyaasha Soomaaliyeed ee la kulmay Madaxweynaha ayaa la wadaagay miro-dhalka Madasha tiknaloojiyadda ee sanadkan, farriintooda ku aaddan horumarinta dhanka cilmiga iyo dib u kabashada dalka.
Roobab Muqdisho xalay ka da’ay iyo Masuuliyiinta gobolka Banaadir oo tagay meelaha ugu daran “Sawirro”
Wasiir Maareeye iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo u amba-baxay dalka Talyaaniga